အခြားမော်ကွန်းတိုက် - Page3of 304 - TELES RELAY
Cuomo -“ ထောင်ပေါင်းများစွာသေလိမ့်မယ်” - New York Times
Les décès sont passés de 728 à 965. Ce qui se passe maintenant, comme je l'ai mentionné hier, c'est que les gens sont de plus en plus sous ventilation. Plus vous restez longtemps sous ventilateur, moins vous avez de chances de…
Non, Didier Raoult n’a pas demandé aux africains de ne pas prendre le vaccin de Bill Gates contre le…
L’information selon laquelle le célèbre scientifique français Didier Raoult, défenseur de la chloroquine comme médicament pour soigner le Covid19, aurait demandé aux africains de ne pas prendre le vaccin de Bill Gates contre le…
ကူးစက်ရောဂါများကိုခြေရာခံရန်အတွက်တရုတ်နိုင်ငံသည်ဘက်ပေါင်းစုံလုံခြုံရေးစနစ်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ပျက်သွားသည် - …
တရုတ်ကာကွယ်ရေး၏အချက်အချာမှာအမျိုးသားတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သောရောဂါအစီရင်ခံမှုစနစ်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး SARS ကပ်ရောဂါကိုနှေးနှေးနှင့်ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ကင်မရွန်းသည်အမှတ်အသား ၁၀၀ ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်
Avec un total de 139 cas positifs confirmés,5guérisons et6décès au 29 mars 2020, le Cameroun entre dans une phase critique de la propagation du coronavirus. L’inquiétude est de plus en plus grandissante. Le Dr Manaouda Malachie,…
Cameroun-Messanga Nyamding se moque et sous-estime le parcours Maurice Kamto « C’est un débrouillard…
Cameroun-Messanga Nyamding se moque et sous-estime le parcours Maurice Kamto « C’est un débrouillard académique, il n’a même pas le Baccalauréat » Cet article est apparu en premier sur 237 ACTU
Live Coronavirus သတင်းများနှင့်သတင်းများ - New York Times
Dans la capitale, Delhi, des milliers de migrants, y compris des familles entières, ont emballé leurs pots, casseroles et couvertures dans des sacs à dos, certains balançant de petits enfants sur leurs épaules alors qu'ils marchaient…
Coronavirus-Ultimatum de7jours au président Biya : Albert Dzongang insulte littéralement Jacques…
Coronavirus-Ultimatum de7jours au président Biya : Albert Dzongang insulte littéralement Jacques Fame Ndongo et Grégoire Owona Cet article est apparu en premier sur 237 ACTU
Liberty University မှကျောင်းသားများနှင့် coronavirus များကိုလည်းနယူးယောက်တိုင်းမ်မှပြန်လည်ခေါ်ယူသည်
ဗာဂျီးနီးယားလင်း၊ ဘာလင် - Liberty တက္ကသိုလ်၏နွေ ဦး ရာသီသည်ယခုလတွင်အဆုံးသတ်သွားသောအခါ၎င်း၏ဥက္ကpresident္ဌဂျယ်ရီဖဲဝဲလ်ဂျူနီယာသည်ကျောင်းသားကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောဆရာဝန်နှင့်စကားပြောခဲ့သည်။
Coronavirus ရှိသူမည်မျှသိသင့်သနည်း။ - New York Times သတင်းစာ
“ ကျွန်တော်တို့အခုလေ့လာနေပြီး၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အခြားနိုင်ငံများမှလေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများအားလုံးကိုလုံးဝလေ့လာရန်ကြိုးစားနေသည်” ဟုပါမောက္ခ Lewnard ။
Rabe ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနှင့်စပ်သော White Bean Stew စာရွက် - New York Times
ရေခဲသေတ္တာသန့်ရှင်းရေးအခြေအနေမဟုတ်ပါ၊ ဤအလွန်အမင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စွပ်ပြုတ်သည်သင်၏လက်တွင်ရှိသည့်အရာများစွာကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ သဘာဝအားဖြင့်သက်သတ်လွတ်စားသူဖြစ်သော်လည်းမတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
လွန်ခဲ့သော 12345 ... 304 လာမယ့်